Hiob 28 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
28 “Dwetɛ wɔ hɔ yi, ɛwɔ baabi a wotu no,Na sika nso wɔ baabi a wɔnan yiyi mu;+ 2 Wonya dade fi dɔte mu,+Na wohwie kɔbere fi abo mu. 3 Onipa ma esum yera;Na ɔhwehwɛ baabiara+ pɛ ɔbo,Nea ɛhɔ yɛ kusuu, ne esum kabii mu. 4 Otu fagude amoa wɔ baabi a obiara nte,+Baabi a onipa werɛ afi, nea ɛmmɛn anammɔn biara;Nnipa bi sian kɔ mu, na wɔkɔsensɛn hɔ. 5 Asase wɔ hɔ yi, emu na aduan fi ba;+Nanso onipa dan ani butuw sɛnea ogya yɛ. 6 N’abo mu na hoabo+ wɔ,Na sikafuturu nso wɔ mu. 7 Ɔkɔre+ biara nnim saa kwan no,Na asansa+ aniwa nso nhui. 8 Wuram mmoa akɛse nan nsii so;Gyata nnantenantew so. 9 Onipa teɛ ne nsa so twɛrebo mu;Otutu mmepɔw ase; 10 Otwitwa nsuka wɔ abotan mu,+Na n’aniwa hu aboɔden nneɛma nyinaa. 11 Osisiw baabi a nsubɔnten fi ba,+Na oyi nea ahintaw ba hann mu. 12 Nanso nyansa de, ɛhe na ɛwɔ?+Na ntease nso, ɛhe na ne tenabea wɔ? 13 Onipa desani nhuu ne bo,+Na wonhu wɔ ateasefo asase so. 14 Subun ka sɛ,‘Enni me nkyɛn!’Ɛpo nso ka sɛ, ‘Enni me hɔ!’+ 15 Wɔrentumi mfa sika amapa nsesã,+Na wɔrentumi nkari dwetɛ ntua ka. 16 Wɔrentumi mfa Ofir sika+ ntua ka,Na sohambo a ɛho yɛ nã ne hoabo nso, wɔrentumi mfa ntua ka. 17 Wɔrentumi mfa sika ne ahwehwɛ ntoto ho,Na wɔrentumi mfa sika amapa anwenne biara nsesã. 18 Mmota+ ne hyerɛmmo mpo ne no nsɛ,Nanso nyansa kotoku mã bo yɛ den sen ahene kotoku mã.+ 19 Wɔrentumi mfa Kus akraatebo+ ntoto ho;Na sika amapa nso wɔrentumi mfa ntua ka. 20 Nanso nyansa​—ɛhe na efi,+Na ntease nso, ɛhe na ne tenabea wɔ? 21 Wɔde ahintaw ɔteasefo biara aniwa,+Na wɔde asie nnomaa a wotu fa wim. 22 Ɔsɛe amoa ne owu ka sɛ,‘Yɛn aso na ate ho asɛm.’ 23 Onyankopɔn na ɔte n’akwan ase,+Na ɔno na onim ne tenabea, 24 Ɔno na ohu asase ano nohoa;+Ohu ɔsoro ase baabiara, 25 Na ɔma mframa ahoɔden;+Nsu nso, ɔde ade susuw;+ 26 Bere a ɔhyɛɛ mmara maa osu,+Na otwaa kwan maa osuframa ne aprannaa no, 27 Ɛhɔ na ɔde n’aniwa huu nyansa, na ofii ase kaa ho asɛm;Osiesiei, na ɔhwehwɛɛ mu nso. 28 Na ɔka kyerɛɛ onipa sɛ,‘Hwɛ! Yehowa suro​—ɛno ne nyansa,+Na bɔne ho fi ne ntease.’”+